Kubizwe abanamava emaqenjini akuleli abazodlala neZimbabwe
UKHAYA Zondo wamaDolphins ubiziwe esikwatini seSouth Africa A esizodlala neZimbabwe Isithombe: BACKPAGEPIX
AZOHOLWA uHeinrich Klaasen amaqembu akuleli ekhilikithi yabesilisa abizwa ngeSouth Africa A azobhekana neZimbabwe XI emidlalweni eyisishiyagalombili kusukela ngoMsobuluko kuya kuMay 10.
La maqembu ajwayele ukuhlanganisa abadlali ababheke ukulwela izindawo eqenjini elikhulu lesizwe, amaProteas.
Abaqoki beCricket South Africa (CSA) bahlanganise amaqembu aqinile azogijima kule midlalo ezobanjelwa eHarare. La mazwe angomakhelwane azodudulana emidlalweni emithathu yosuku olulodwa ngaphambi kokuthi atholane phezulu kwemihlanu yeT20.
Amaqembu amabili eSouth Africa A agcwele inqwaba yabadlali asebeke balithola ithuba lokugijima eqenjini lamaProteas okukhona uKhaya Zondo, Andile Phehlukwayo, Theunis de Bruyn, Prenelan Subrayen nalabo abenze kahle emiqhudelwaneni yasekhaya.
“Kuzoba amasonto ambalwa athokozisayo eHarare, i-National Selection Panel kanye nami sikhethe abadlali abasezingeni eliphezulu. Sithathe labo abasafufusa sabahlanganisa nabanamava okudlala kumaProteas, okukhombisa ukuthi asiluthathi kancane lolu hambo,” kusho inhloko yabaqoki beCSA, uVictor Mpitsang.
“Uhlelo lwe-CSA High Performance lubalulekile kule nhlangano futhi kusemqoka ukuthi abadlule kulona bathole ithuba lokudlala ukuze luphumelele. Sikubheke ngabomvu ukubuka le midlalo futhi sibone ukuthi yini ezokwenziwa yileli qembu elizoholwa uHeinrich Klaasen.
“Ngithanda ukufisela uHeinrich nomqeqeshi, uMalibongwe Maketa, okuhle kodwa kulolu hambo.”
Iqembu leSouth Africa A lemidlalo yosuku olulodwa:
Heinrich Klaasen (ukaputeni), Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Tony de Zorzi, Theunis de Bruyn, Khaya Zondo, Andile Phehlukwayo, Lutho Sipamla, Bjorn Fortuin, Daryn Dupavillon, Lizaad Williams, Prenelan Subrayen, Jason Smith, Lesiba Ngoepe, Gerald Coetzee.
Iqembu leSouth Africa A lemidlalo yeT20:
Heinrich Klaasen (ukaputeni), Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Khaya Zondo, Andile Phehlukwayo, Lutho Sipamla, Bjorn Fortuin, Daryn Dupavillon, Lizaad Williams, Prenelan Subrayen, Jason Smith, Lesiba Ngoepe, Gerald Coetzee, Tristan Stubbs, Wihan Lubbe.